Khulafo al-Rashiidiintu waa afarta asxaabi ee hogaanka iyo talada maamulka Dawladda Islaamka la waday Nebi Muxamed SCW intii uu noolaa isla markaana gacanta ku dhigay ayagoo iskaga dambeeyay hogaaminta dowladii Islaamka. Wakhtigii Khulafo al Raashidiinta Dawladda Islaamku aad ayay u balaadhatay waxayna gaadhay meelo badan oo ka mid ah Bariga Dhexe, galbeedka qaarada Yurub, waqooyiga Afrika, bariga fog iyo wadano aad u badan oo kale. Wakhtigani maamulka Dawladda Islaamka ee Afarta Khulafo wuxuu bilaabmey 8dii Juune sanadkii 632 C.D; wuxuuna dhamaadaa 28 Luuliyo sanadkii 661 C.D taasi oo ku beegan goortii la dilay Cali binu Abi Dalib ee xilka iyo hogaanka Dawladda Islaamka uu la wareegay Mucaawiya binu Abi Sufyaan. Intii Afarta Khulafo talada Dawladda Islaamka hayeen waxay qabsadeen dhu aad u baaxad weynt taasi oo lagu qiyaaso 9,000,000 km² (sagaal milyan mitir laba-laaban) (3,474,919 sq mi). Tirada dadka ku hoos jirey maamulka iyo hogaanka Khulafo al-Raashidiinta waxaa lagu sheegaa 40,300,000 (qiyaas dhan 40 milyan oo qof).
Abu Bakr Abu Bakr Sadiiq (ingiriis: Abu Bakr; carabi: أبو بكر الصديق; magaca dhamaystiran Cabdullah ibn Abi Quhafa "عبد الله بن أبي قحافة") dhashay Oktoobar 573 C.D magaalada Makka ee dhulka Carabta, isla markaana dhintey 23 Ogosto 634 C.D, waa saaxiibka koowaad ee [[Nebi Muxamed] SCW], hogaamiyihii labaad ee Dawladda Islaamka, asxaabi ka mid ah Kulafo Raashidiinta iyo mid ka mid ah asxaabta rasuulka CS.
Abu Bakr wuxuu ahaa hogaamiye sare ee maamulka Dawladda Islaamka intii uu Nebigu SCW noolaa iyo markii uu geeriyoodayba. Sidoo kale wuxuu ahaa sodoga iyo saaxiibka koowaad ee [[Nebi Muxamed] SCW] (n.n.k.h). Abu Bakr waxa uu hogaanka iyo talada Khulafada Rashiidiinta hayay ka soo biloow 632–634 C.D markaasi oo uu noqday hogaamihii kowaad Muslimiinta iyo khaliifyada ka dib markii Nebi Maxamed geeriyooday.
Goortii nebigu SCW u hijroonayay magaalada Madina Abu Bakr wuxuu ahaa qofka kali ah ee rasuulka SCW la galay safarkaasi. Wuxuuna ka garab dagaalamay Nebi Muxamed SCW qaswado aad u badan ooy ka mid yihiin Dagaalkii Beder, Dagaalkii Uxud, Dagaalkii Dhufeysyada, qabsashaddii magaalada Makka, Dagaalkii Kheybar, Dagaalkii Xunayn, go'doomintii Daa'if iyo Dagaalkii Tabuk. Dagaaladani wuxuu Abu Bakr ku kharash gareeyay in badan oo dhaqaalihiisa ka mid ah.
Si kastaba ha ahaatee, goortii [[Nebi Muxamed] SCW ] geeriyooday waxaa khulafo Raashidiintu si waafaqsan dardaarankii nebiga isla garteen in Abu Bakr lagu wareejiyo hogaanka iyo talada maamulka dowladii Islaamka. Wakhtigani waxaa dhacday khilaaf aad u wayn oo dad badan ayaa diinta Islaamka dib uga noqdey maadaama nebigii SCW waxyigu ku soo dagayay geeriyooday. Abu Bakr sadiiq wuxuu hogaanka Dawladda Islaamka hayay labo sano iyo xoogaa (27 bilood) taasi oo uu isku duba ridey maamulka Dawladdaasi.
↑ "sodoga iyo saaxiibka koowaad ee [[Nebi Muxamed] SCW]"
↑ Shahid Ashraf, "Encyclopaedia of Holy Prophet and Companions", Anmol Publications PVT. LTD., 2004, ISBN 81-261-1940-3  Archived Jannaayo 3, 2014 // Wayback Machine
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Khilaafada_Islaamka&oldid=228670"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Jannaayo 2022, marka ee eheed 18:07.